यसपालीको भ्यालेन्टाइनमा यी राशी हुनेलाइ आउछ प्रेम प्रस्ताव : कतै तपाइको राशी त परेन ? हेर्नुहोस - Mitho Khabar
February 6, 2020 mithokhabarLeaveaComment on यसपालीको भ्यालेन्टाइनमा यी राशी हुनेलाइ आउछ प्रेम प्रस्ताव : कतै तपाइको राशी त परेन ? हेर्नुहोस
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवस हरेक बर्ष अंग्रेजी महिनाको फेब्रुअरी १४ मा विश्वभर मनाइन्छ ।
यस दिन आफूलाई मन परेका मान्छेलाई कार्ड, फूल, चकलेट तथा अन्य सामग्री दिई प्रेम प्रस्ताव राख्ने तथा प्रेम दर्शाउने गरिन्छ । अन्य बेला प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेकाहरुले भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न सहारा लिने गरेका छन् ।
यस अवस्थामा कुन राशिका लागी कस्तो रहनेछ त यो प्रेमदिवस हेरौ राशि अनुसार ।